८ महिनामा १ सय ४५ जना महिला लैंगिक हिंसाबाट पिडित् – Google pati
८ महिनामा १ सय ४५ जना महिला लैंगिक हिंसाबाट पिडित्
८ चैत्र २०७६ ०७:१६
हेटौडा— मकवानपुर जिल्लामा ८ महिनामा १ सय ४५ जना महिलाहरु हिंसामा परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको डाटाले देखाएको छ । यो जि.प्र.का. मकवानपुरको लैंगिक हिंसा सम्वन्धित् ८ महिनाको डाटा हो । हिंसामा परेकाहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिइएका उजुरीका आधारमा हुन् । पुरुषले गरेको मादक पदार्थ सेवनका कारण अधिकाश महिलाहरु हिसांमा परेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षकोे साउन देखि फाल्गुन सम्मको रेकर्डअनुसार १ सय ४५ जनाले लौंगिक तथा अन्य हिंसामा परेको भन्दै कानुनी कारवाही गरि पाउँ भनी प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । साउनमा २३ जनाले उजुरी दर्ता गरेकोमा १७ जनाको फस्र्याैट गरिसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ । भाद्र महिनामा ३६ जनाले उजुरी दर्ता गरेकोमा १८ जनाको फस्र्यौट भइसकेको र १८ जनाको बाँकी रहेको जनाइएको छ । असोज महिनामा २६ जनाले उजुरी दर्ता गरेकोमा १३ जनाकोमात्र फस्र्याैट भएको छ । कात्र्तिक महिनामा १९ जनाले उजुरी दर्ता गरेकोमा १० जनाको मात्र फस्र्याैट भएको छ । मंसिरमा ९ जनाले उजुरी दर्ता गरेका छन् । तीमध्ये ३ जनाको मात्र फस्र्याैट भएको छ भने पौषमा १६ जनाले निवेदन पेस गरेकोमा ९ जनाको मात्र फस्र्यौट भएको हो । त्यस्तै माघ महिनामा ७ जनाले निवेदन पेश गरेकोमा ५ जनाको फस्र्यौट भएको छ र फाल्गुन महिनामा ९ जनाले निवेदन पेश गरेका मध्ये ४ जनाको फस्र्यौट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता ललनप्रसाद कुर्मीले बताए ।
सरकारले मदिरालाई मुख्य कारण मानेर समाजमा बढिरहेको अपराध न्युनिकरण गर्न नसक्ने प्रवक्ता कुर्मीको भनाई छ । २०७६÷७७ का साउनदेखि असोजसम्मको तथ्याङक अनुसार महिला तथा बालबालिका विरुद्ध भएका अपराधमा जबर्जस्ती करणीको संख्या सबैभन्दा बढी छन् । घरेलु हिसांको उजुरी बढी पर्नुले नागरिकमा सचेतनाको स्तर बढेकै मान्नुपर्ने कुर्मीको भनाई छ । हिसां हुनु गलत हो तर हिसांमा परेपछि त्यसको उपचार खोज्नुपर्छ, सकरात्मक रुपमा लिनुपर्ने उनले बताए । तथ्यांकले बहुविवाह, बालविवाह र बालयौन दुराचारका घटना बढेको देखाउँछ । बोक्सीको आरोप, अवैध गर्भपतन, जातीय छुवाछुतका घटनाहरु दर्ता भएका छन् । देशले लैंगिक हिसां विरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै लैंगिक हिसांमुक्त प्रदेश बनाउन प्रतिवद्धता लिइएको छ ।
हेटौंडामा हुने छलफलका क्रममा प्रायः सबैले मदिरा नै हिसांको मुख्यकारण मान्ने गरेका छन् । हिंसाका विविध प्रकार भए पनि सबै हिंसा मदिरा सेवन पछि भएको पाइने प्रहरीको भनाई छ । अभियानले मदिराबाट हिंसाको दर बढेको देखाए पनि पितृसत्ता नै लैंगिक हिंसाको कारक भएको विश्लेषक बताउँछन् ।
धेरै समाजमा पुरुषभन्दा बढि महिला विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट पीडित रहेका जि.प्र.का. डाटाले देखाएको छ । लैंगिक हिंसा लिंगका आधारमा हुने हिंसा विश्वका धेरै समाजमा समस्याको रुपमा देखिदै आएको पनि जनाइएको छ ।